Vonona amin'ny loza voajanahary: ny taloha sy ny manaraka
Home » Lahatsoratra farany farany » Safety » Vonona amin'ny loza voajanahary: ny taloha sy ny manaraka
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Resorts • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Oktobra 2, 2021
Tamin'ny taon-dasa, 2020, dia tsy ny taona voalohany tamin'ny valan'aretina COVID-19, fa nahita fiakarana koa tamin'ny oram-baratra mahery sy loza voajanahary hafa toy ny doro ala manerana an'izao tontolo izao.
Ny taona 2021 dia nampianatra antsika indray fa mety hiharatsy hatrany ny raharaha. Any Etazonia, New Orleans sy ireo tanàna fizahan-tany maro manamorona ny morontsirakin'ny Helodrano dia potiky ny rivodoza mahery vaika iray manerantany.
Any andrefana dia may ny doro ala nanidy ny faritry ny Lake Tahoe malaza eran-tany.
Ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao dia nijaly koa tany Eoropa dia nahita ny vanim-potoana ratsy indrindra nandrehitra ny ala, ary firenena eropeana maro no tratry ny tondra-drano.
Ireo hetsika ara-toetrandro ireo dia tokony hanaitra ny olona rehetra amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Natiora natiora dia nanazava mazava tsara fa ny dia & fizahan-tany dia indostria tena marefo. Indostria miankina matetika amin'ny toetr'andro izy io.
Matetika, ny toekarena sy ny tombom-pizahantany dia miantra amin'ny hetsika voajanahary. Ohatra, i Amerika Afovoany sy Karaiba matetika dia eo am-pelatanan'ny fotoanan'ny rivo-doza. Any amin'ny faritra Pasifika, ireo tafio-drivotra an-dranomasina midadasika, izay antsoina matetika hoe rivo-doza, dia mahafaty ihany koa. Amin'ny faritra hafa amin'ilay teny, dia misy ny volavolan-dalàna sy ny tondra-drano, ny horohoron-tany ary ny tsunami ary ireo antsoina hoe loza voajanahary ireo dia mety hanimba ny indostrian'ny fizahantany. Taorian'ny loza voajanahary ho an'ny maro amin'ny sehatry ny fizahantany, miadana ny fahasitranana ary miaraka amin'ireo orinasa miatrika fatiantoka sy olona very asa. Noho ny areti-mandringana COVID-19 dia orinasa maro no tsy mahavita intsony noho ny teo aloha mba ho sitrana mora foana amin'ny loza voajanahary. Mampalahelo fa tsy afaka mifehy ny toetrandro na ny toetr'andro isika, fa tsara ny miomana amin'ny horohoron-tany, tadio sy rivo-doza / rivodoza na doro ala alohan'ny hitrangan'izany.
Ho fanampiana anao hiomanana dia omeko ireto sosokevitra manaraka ireto.
-Molavola drafitra alohan'ny hitrangan'ny loza. Miandry mandra-pahatongan'ny rivodoza dia tara loatra manomboka mihetsika. Mamolavola drafitra mialoha ny hamehana. Ity drafitra ity dia tokony ho lafiny maro ary tokony hisy ny fikarakarana ireo izay mety maratra na marary mandritra ny loza, mitady trano fialofana ho an'ny mpitsidika, mamaritra hoe iza ary iza no tsy mijanona amin'ny hotely, mamorona ivon-toerana fifandraisana.
-Mieritrereta momba ny drafitra fandraharahana fanarenana sy drafitra marketing alohan'ny hitrangan'ny loza. Raha vantany vao misedra loza voajanahary ianao dia ho be atao loatra amin'ny famoronana lavadrano mandritra ny drafitra fanarenana. Makà fotoana handaminana fotoana rehefa tsy dia mikorontana ny raharaha ary manam-paharetana ianao ary manam-potoana hifaneraserana amin'ny hafa toy ny sampana mpamono afo, biraon'ny polisy, tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana ary manam-pahaizana amin'ny fitantanana vonjy maika. Fantaro amin'ny anarany ireo olona ireo ary alao antoka fa fantany hoe iza ianao.
-Manangana fifandraisana miasa tsara eo amin'ny orinasa tsy miankina sy ny masoivohon'ny governemanta. Alohan'ny hitrangan'ny loza iray, alao antoka fa fantatrao ny anaran'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta izay mety ilainao hitodihana. Araho miaraka amin'ireo olona ireo ny drafitrao ary mahazoa ny heviny alohan'ny krizy.
-Aza hadino fa matetika ny loza dia fotoana mety hanaovana asa ratsy. Hamarino tsara fa ny sampan-draharahan'ny polisy dia ao anatin'ny drafitry ny voina, tsy amin'ny fomba fijery mpampihatra lalàna ihany fa amin'ny fomba fijery ny fifandraisana amin'ny besinimaro sy ny fanarenana ara-toekarena. Ny zavatra lazain'ny departemantan'ny polisy anao sy ny fihetsika asehony amin'ireo mpitsidika dia mety hisy fiatraikany amin'ny fahasitrananao sy ny indostrian'ny fizahantany eo an-toerana mandritra ny taona maro.
-Mampivoatra fifandraisana tsara eo amin'ireo masoivohon'ny mpamaly voalohany. Mpiasa fizahan-tany maro no mihevitra fotsiny fa misy fifandraisana miasa tsara eo amin'ny maso ivoho federaly, fanjakana, faritany na bizina eo an-toerana. Matetika tsy izany no izy. Ny fiaraha-miasa tsy miankina amin'ny fiaraha-miasa dia hita taratra amin'ny orinasa fizahan-tany na fiaraha-monina misy anao. Ohatra, Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny masoivohon'ny polisy dia tsy zatra fiofanana momba ny fizahan-tany ary tsy mahalala ny fomba hitantanana ny filàna manokana eo amin'ny sehatry ny fizahantany mandritra ny fotoan-tsarotra.
-Mampivoatra protokolola iray hiresahana fampahalalana voasokajy. Ohatra, raha sendra vonjy maika, hiara-miasa ve ny trano fandraisam-bahiny amin'ny famelana ny anaran'ireo vahiny navoaka? Raha eny, amin'ny toe-javatra manao ahoana? Rahoviana no tokony havoaka ny firaketana ara-pahasalamana ary inona no andraikitry ny indostrian'ny fizahantany eo an-toerana momba ny fiainana manokana sy ny olana ara-pahasalamam-bahoaka?
-Mampivoatra ny protokolà fahazoan-dàlana fiarovana. Mandritra ny fotoanan'ny loza dia mety ilaina ny fanadiovana ara-dalàna isan-karazany. Raha vao niseho ny loza dia tara loatra vao manomboka mandamina ny olana ara-dalàna. Mamolavola lisitra izao ary mahazoa ny famafana ilaina mandritra ny fotoana milamina. Toy izany koa, mandehana miaraka amin'ny olonao ara-pahasalamam-bahoaka izay politika hapetraka raha toa ka tokony hampiharina ny politikam-pitsarana.
-Ao amin'ity tontolon'ny aretina mandehandeha ity dia ilaina ny mampivelatra ireo masoivoho fizahan-tany momba ny fahasalamana ho an'ny mpitsidika ary mampahafantatra izany. Raha misy tondra-drano, mety hisy horohoron-tany na loza voajanahary hafa hiseho amin'ny karazana olana vaovao. Ny mpitsidika dia mety very fanafody ary tsy afaka mahazo solony, ny olona sasany dia mety tsy maniry ny hanana olana ara-pahasalamana manokana ho anisan'ny firaketana ampahibemaso. Ny mpitsidika dia hanana fanahiana avo kokoa noho ny hoe tao an-trano izy ireo ary mety manantena isika fa hahita olana ara-pahasalamana ateraky ny adin-tsaina bebe kokoa.
-Mahafantatra na manaova drafitra raha toa ka mandrakotra faritra na faritra misy faritra maro ny indostrian'ny fizahanao. Isaky ny azo atao, mamorona fitsipi-pitondran-tena sy fifandraisana miasa eo amin'ny maso ivoho, trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, toeram-pialofana vonjy maika, ary sampan-draharaha fanampiana hafa izay mamakivaky ny fari-tanànan'ny tanàna, faritany, faritany na faritany.
-Ataovy antoka fa manana telefaona tolotra Internet na tolotra Internet maimaim-poana ianao ary ampahafantaro amin'ny toerana ahafahan'ny mpitsidika mampiasa ireo serivisy ireo raha sendra delestazy. Ny mpitsidika dia te-hiantso ary ny olon-tiany dia te-hiantso azy ireo. Raha vantany vao azo atao, manorata endrika fifandraisana maimaim-poana. Tsy hohadinoin'ireo mpitsidika izany fihetsika mampiantrano vahiny izany.
-Mandramà programa fanarenana fizahantany maharitra eo noho eo. Ireo fandaharam-potoana maharitra ireo dia tokony hihoatra lavitra ny fivarotana ny faritra na amin'ny fanomezana vidiny ambany. Ny programa dia tokony hampidirina zavatra toa ny fiaraha-miasa amin'ireo matihanina amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fametrahana toeram-panohanana ho an'ireo mpitsidika izay tafavoaka velona. Rehefa mandao ilay faritra voadona ilay mpitsidika dia hitohy mijaly noho ny loza voajanahary izy. Makà anarana, adiresy mailaka ary nomeraon-telefaona ary alao antoka fa mandray antso manaraka ny mpitsidika anao. Tsy tokony hivarotra na inona na inona mihitsy ireo antso ireo fa ampahafantaro fotsiny ny mpitsidika fa miahy azy ireo ny masoivohonao.
Ny mpanoratra, Dr. Peter E. Tarlow, dia mpiara-miasa amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany ary mitarika ny Fizahantany azo antoka kokoa fandaharana.
Jamaika: Fandinihana tranga fanofanana vaovao manokana
Airbus: fiaramanidina vaovao 39,000, mpanamory vaovao 550,000 no ilaina...